Etu esi egbochi Enweta Nchọgharị na Nkọwapụta WordPress | Martech Zone
Saturday, January 23, 2021 Tuesday, August 24, 2021 Douglas Karr
O yiri ka ọ bụla ahịa nke abụọ anyị nwere WordPress saịtị ma ọ bụ blog. Anyị na-eme ọtụtụ mmepe omenala na imewe na WordPress - ihe niile site na mgbakwunye plugins maka ụlọ ọrụ iji mepụta ngwa ọrụ vidiyo na-eji ọrụ igwe ojii Amazon. WordPress bụghị mgbe niile ihe ngwọta ziri ezi, ma ọ bụ nnọọ mgbanwe na anyị mara mma na ya.
Ọtụtụ oge, anyị na-etinye saịtị ka ndị ahịa anyị nwee ike ihuchalu ma katọọ ọrụ ahụ tupu anyị etinye ya na ndụ. Oge ụfọdụ anyị na - ebubata ọdịnaya nke ndị ahịa ugbu a ka anyị wee nwee ike rụọ ọrụ na ezigbo saịtị yana iji ọdịnaya dị ndụ. Anyị achọghị ka Google gbagwoju anya gbasara saịtị ọ bụla ezigbo saịtị, ya mere anyi mebie engines ọchụchọ site na ntaneti saịtị na iji usoro di iche iche.
Etu esi egbochi Enweta Nchọgharị Na WordPress
Buru n'uche na ngọngọ nwere ike siri ike a okwu. E nwere ụzọ igbochi ndị na search engine crawler n'ezie ịnweta gị na saịtị what ma ihe anyị na-eme ebe a bụ n'ezie dị nnọọ na-arịọ ha ka ha ka ndeksi na saịtị ha search results.
Iji mee nke a n'ime WordPress dị mfe. Na Ntọala> Ọgụgụ menu, ị pụrụ nanị ịlele a igbe:
Etu ị ga - esi gbochie Enjin Nchọgharị iji Robots.txt
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ndekọ ndekọ weebụ saịtị gị dị, ị nwekwara ike gbanwee robots.txt gị faịlụ ka:
Mgbanwe robots.txt ga-arụ ọrụ maka weebụsaịtị ọ bụla. Ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ndị Ọnọdụ Math SEO ngwa mgbakwunye na-enyere ike imelite faịlụ Robots.txt gị ozugbo site na interface ha… nke dị ntakịrị karịa ịnwale FTP na saịtị gị ma dezie faịlụ ahụ n'onwe gị.
Ọ bụrụ na ị na-emepe ngwa a na-agwụchabeghị, na-echekwa sọftụwia na ngalaba ma ọ bụ subdomain dị iche, ma ọ bụ na-emepe saịtị abụọ maka ụfọdụ ihe kpatara ya - ọ dị mma igbochi engines ọchụchọ site na ịkọwapụta saịtị gị ma were ndị ọrụ injinia ihe na-ezighi ezi!
Ngosipụta: Abụ m onye ahịa na onye mmekọ nke Ọkwa Math.
Tags: mgbochi bingngọngọ duckduckgogbochie njin ọchụchọn'usoro math seo ngwa mgbakwunyerobots.txtWordPressntọala wordPresswordpress ntọala
Ọzụzụ Ahịa Dijitalụ